दुःखद खबर मलेसियामा सप्तरीका काेशिन्दर''को मृ'त्यु | Nepali Janata Khabar
मलेसियाको केडा राज्य काे सुङ्गेपेतानि मा रहेको asia plywood company SDN BHD मा बिगत ६ वर्ष देखि काम गर्दै अाएका सप्तरी जिल्ला कुसाहा ७ का काेशिन्दर सदा काे गत शुक्रबार मृत्यु भएको छ।
अचानक छाति दुख्यो दुखेको बताएका उन्लाइ उपचारको लागि हस्पिटल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो। अहिले मृतक को सव sultan abdulah halim मा पोस्टमार्टमको लागि राखिएको र उनको मृत सब दाहसंस्कार को लागि नेपाल पठाउने तयारी भैरहेको कम्पनी श्रोत ले जानकारी दिएको छ।
वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म काम गर्ने। अहिलेसम्म गर्भनिरोधक चक्की र सुई महिलाका लागि मात्र बनेका थिए। महिलाहरुले एक पटक सुई लगाए तीन महिनासम्म गर्भ नबस्ने सुई प्रचलित छ।
तर, अहिले भारतीय वैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि पनि सुई बनाएका छन्। त्यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म बच्चा नहुने बताइएको छ । भारतीय वैज्ञानिकहरुको पहिलोपटक यस्तो सुई बनाएको दाबी गरेका छन् । यो सुई इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चका वैज्ञानिकहरुले तयार पारेका हुन्।
सुई आविष्कारमा संलग्न वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म काम गर्नेछ। उक्त सुईको प्रयोग भारतको पाँचवटा राज्यमा भइसकेको छ। दिल्ली, हिमाञ्चल, जम्मू, पञ्जाब र राजस्थानमा यसको परीक्षण गरिएको हो । ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इण्डियाले सुई पास गरेपछि सर्वसाधारणले पनि लगाउन पाउनेछ।
यो पनि : बागमती सफाइ महाअभियान ४०४ औँ हप्तामा
बागमती सफाइ महाअभियानको ४०४ औँ हप्तामा आलोकनगर शिव मन्दिर नजिकैको नदी किनारमा सफाइ गरिएको छ । सफाइबाट १० मेट्रिकटन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए ।
श्रोत नखुलेको ४९ लाख नेपाली रुपैयाँसहित दुई प’क्राउ